परिसमापन कम्पनी को बिक्री मार्फत: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
अनुसार प्रक्रिया को सामान्य नियम संग परिसमापन कम्पनी अर्को व्यक्ति अधिकार र दायित्व को स्थानान्तरण बिना संगठनको समापन आवश्यक छ। आफै गरेर, परिसमापन प्रक्रिया एकदम जटिल र बहु-चरण हो, तर यो गर्न सक्नुहुन्छ एकदम व्यापार अवरोध को वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर सरलीकृत गर्न। यो बिक्री मार्फत एक reorganization वा परिसमापन लिमिटेड हुन सक्छ।
यदि यी दुई विधिहरू बीच विकल्प, तपाईं बिक्री, उन्मूलन को यो विधि तेज र सजिलो मानिन्छ देखि चयन गर्नुपर्छ। साथै, दुई तरिकामा को बिक्री मार्फत व्यापार निर्मूल गर्न।
वैकल्पिक परिसमापन विशेषताहरु
संगठन यसको गतिविधिहरु रोकिंदैन। बिक्री गर्दा एक कम्पनी बन्द छैन, यो अधिकार, कर्तव्य रोक्न र ठेकेदार संग काम गर्दैन। सहभागीको मात्र संरचना परिवर्तन।
कर्मचारीहरु परिवर्तन गर्दैन। संगठन को नयाँ मालिक टाउको को नियुक्ति मा निर्णय, तर कुनै नियमहरु incumbent निर्देशक खारेज गर्न यो oblige छैन। एउटै अधिकारीहरु र अन्य कर्मचारीहरु लागू: तिनीहरूले बिक्री LLC पछि आफ्नो जब गुमाउनु छैन भने यसलाई आवश्यक छैन।
बिक्री मार्फत परिसमापन कम्पनी एकदम चाँडै बाहिर छ। सारा प्रक्रिया, एक महिना भन्दा कम लाग्छ खरिदको सम्झौता संग र बिक्री मालिकहरूको प्रतिस्थापन भन्दा छिटो बाहिर छ।
कम्पनी पूर्ण disbandment जस्तै, कर सहित कुनै पनि रोक्छ, विषय छैन। संगठन यसको गतिविधिहरु जारी, यो कर बकाया र अनुपालन को भुक्तानीको लागि प्रमाणिकरण गतिविधिहरु पूरा गर्न आवश्यक छ।
बिक्री प्रक्रिया अन्त्यमा, तपाईं कानूनी संस्थाहरू को एकीकृत राज्य दर्ता परिवर्तनहरू दर्ता गर्नुपर्छ। कुनै पनि कदम, राज्य दर्ता गर्न अपरिहार्य विषय मालिक र सीईओ को परिवर्तन सहित।
व्यापार को परिसमापन को एक वैकल्पिक विधि, रूपमा पूर्ण disbandment भन्दा धेरै छरितो पहिलो नजर, मा लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ केही nuances हो: पहिलो स्थानमा - यो एउटा चासो खरीदार फेला पार्न र competently कम्पनी बेच्न कसरी जान्नु आवश्यक के छ।
परिसमापन लागि अवस्था
निम्न शर्तहरूमा बिक्री विषय द्वारा परिसमापन कम्पनी:
संगठन को मालिक सबै आवश्यक जानकारी एक योग्य सम्झौता गर्नु पर्छ। सम्झौता मा, उद्यम को सबै सम्पत्ति बजार मूल्य तोकिएको र सूचीबद्ध गर्नुपर्छ। वस्तुको सही तयारी लागि दुवै पक्ष परिणाम हेर्न आवश्यक जो पूरा भएपछि एक सूची बनाउन चाहन्छु। दुवै दल सबै अंक सहमत भने, खरिद र बिक्री सम्झौता मा त हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ।
उद्यमी ऋण को उपस्थिति मा मात्र आफ्नो सहमति ठाउँ लिन सक्छ बिक्री मार्फत ऋण संग, लेनदारों को योजना बारे जानकारी हुनुपर्दछ परिसमापन लिमिटेड रूपमा। मालिकको यो अवस्था बेवास्ता भने, त्यसपछि कारोबार भविष्यमा बर्खास्त गर्न सकिन्छ, र उधारदाताओं कोर्ट मार्फत ऋण ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। समय बिक्री पछि पारित गरेको छ भने पनि, ऋणदाता दावी ल्याउन सही छ।
को लागि व्यापार को बिक्री गर्ने जोडीलाई एक सहमति प्रस्तुत हुनेछ मालिक कानुनी रूपमा विवाह छ भने, यो आवश्यक छ। यदि संस्थापक विवाह छैन, उहाँले कागजात साबित प्रस्तुत गर्न आवश्यक थियो।
सबै सह-मालिक लिमिटेड व्यापार प्राप्त गर्न पूर्व-emptive सही माफ गर्न सहमत भए लेख्न पर्छ।
यी अवस्था सबै अनुपालन पछि, तपाईं LLC को बिक्री को लागि कागजातहरू चित्रकला सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
परिसमापन कम्पनी बिक्री मार्फत: लाभ र बेफाइदा
उन्मूलन को एक वैकल्पिक विधि को मुख्य लाभ - लाभ र प्रक्रियाको गति को। यो विधि आज धेरै लोकप्रिय छ, तर, दक्ष कानुनी सहयोग को सहायता बिना कारोबार सञ्चालन गर्न अत्यन्तै कठिन छ। यसलाई आफ्नै व्यवसाय बेच्न व्यावहारिक असम्भव छ। तदनुसार, आवश्यक उच्च लागत, तर ऋण गर्न तुलनामा खर्च एकदमै न्यून छन्।
प्रक्रिया को वैधता - एक moot बिन्दु। हामी जानिजानि परिसमापन कम्पनी बारे ऋण संग काल्पनिक लेनदेन सञ्चालन गरेर कुरा गर्दै छन् भने - पाठ्यक्रम, यो विधि अवैध छ। तर यदि बिक्री अनुसार कानून को मान्यता संग को लागि, जबकि स्वामित्व वा कानुनी निकाय को बिक्री को कुनै पनि परिवर्तन मा प्रतिबन्ध अवस्थित छैन, कुरा छैन ऋण को राशि संग खर्च। तपाईं कार्य भने, circumvented गर्न कानून अनुसार गर्न सक्ने मात्र कुरा प्रक्रिया को प्रारम्भिक चरणमा मा क्रेडिट संस्थाहरू द्वारा दावा को प्रस्तुति छ।
जोखिम र नतिजा
व्यापार जोखिम लागू गरेर आधारभूत उन्मूलन विधि को कमी देखि उठ्छन्:
ऋण को छुटकारा रही कम्पनी बिक्री, र यसरी पछि, व्यापारी आफूलाई दायित्व र उहाँले मालिक थियो जब समय भयो कि उल्लंघन दायित्व विरुद्ध बीमा थिएन।
सम्पत्ति जटिल रूपमा उधारदाताओं को बिक्री सूचित गर्न आवश्यक संस्थाले को बिक्री प्रक्रिया पूरा, मा कारोबार अन्यथा शून्य र शून्य घोषित हुन सक्छ। यो त व्यवस्था "वरिपरि" छ, वा लेनदेन को पाठ्यक्रम मा ऋण तिर्न भन्ने हो।
बिक्री मध्यस्थकर्ताको को सहायता संग सञ्चालन द्वारा LLC को परिसमापन हुनाले यसलाई सबै प्रक्रियाहरु अवलोकन गर्न वा हुनेछ व्यवस्था कुनै पनि नियम उल्लङ्घन हुनेछ सम्भावना छ। धेरै ध्यान दिएर, निर्मूल गर्न सञ्चालन पूरा गर्ने विशेषज्ञहरु को विकल्प व्यवहार गर्छन्।
विधिहरू बिक्री OOO: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
अन्य व्यक्ति गर्न प्राप्ति कम्पनी छैन संगठन मात्र गाइड परिवर्तन सञ्चालन, भएनन् छ किनभने, शब्द को शाब्दिक अर्थमा एक परिसमापन छ। यस्तो विधि तथाकथित उन्मूलन केही घण्टा मात्र लाग्छ र नोटरी द्वारा बाहिर छ। को दायित्व सबै को बिक्री को पूरा भएपछि कम्पनी नयाँ मालिक मा पारित।
व्यवस्था बिक्री गरेर परिसमापन विभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ:
संगठन को परिसमापन कम्पनी मा साझा को बिक्री तेस्रो पक्ष गर्न मार्फत।
मालिक र सीईओ परिवर्तन गर्न तरिकामा बिक्री।
साझा को बिक्री मार्फत संगठनको परिसमापन
कार्यान्वयन मार्फत परिसमापन कम्पनी कम्पनी को प्रक्रिया पूरा dissolution भन्दा धेरै छिटो छ, तर यो मामला मा, प्रक्रियाहरु केही र कार्यहरूको अनुक्रम पालन गर्न।
निर्णय संगठन को बिक्री को लागि संस्थापक लिमिटेड छ मा एक बैठक संगठित र एउटा रिपोर्ट तयार गर्न।
को दल को सबै कार्यहरू समन्वय।
क्रेडिट संस्थाहरु को बिक्री सूचित।
तयार र खरिद र बिक्री मा एउटा सम्झौता मा सहमत हुनुहुन्छ।
भर्नुहोस् र आवेदन फारम notarize।
बिक्री LLC को एक सम्झौता Notarize।
स्थानान्तरण र सम्पत्ति, ऋण र वैधानिक कोष सहित स्वीकृति को एक कार्य ठाँउ।
प्रासंगिक अधिकारीहरु र सम्झौता संग दर्ता कर अधिकारीहरूले (यो तीन दिन अवधिको बिक्री सम्झौताको साइन पछि समाप्ति अघि गर्नै पर्छ) लागू हुन्छ।
आवेदन सम्झौता र कम्पनी को बिक्री को प्रोटोकल संलग्न हुनुपर्छ। एक हप्ताको सेवा कर्मचारी लागि आईआरएस कागजात को पेश्की पछि कानूनी संस्थाहरू को एकीकृत राज्य रजस्टर नेताहरूले परिवर्तन गर्न संशोधन गरिनेछ।
नेतृत्व मा परिवर्तन
तपाईं एक कम्पनी बेच्न कसरी थाहा छैन? यो विधि वैकल्पिक रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ, यो दुई विधिहरू द्वारा बाहिर छ:
नयाँ मालिक वा मालिकहरूलाई साझेदारी को सम्झौता दान को बिक्री वा दर्ता लागि सम्झौता। यो बिक्री जरुरी मान्न सकिन्छ, प्रक्रिया एक कदम हुन्छ र ठूलो व्यय आवश्यकता छैन।
को पक्षहरूको बीचमा साझा वितरण गरेर कम्पनी बाट निकासी को एक बयान सिर्जना। यो विधि दुई चरणमा स्थान लिन्छ:
कम्पनी को व्यवस्थापन, नयाँ सदस्यहरू शुरू छन्।
कम्पनी स्वैच्छिक निकासी को पूर्व सदस्य, नयाँ मालिक वा मालिकको आफ्नो शेयर प्राप्त।
नियुक्त नयाँ सदस्य सीईओ कम्पनी को अगाडी कार्यहरू लागि सबै जिम्मेवारी वहन। तपाईं सम्मान गरिएको छ भने अर्डर बिक्री कम्पनी, सबै प्रक्रियाहरु पूर्व मालिकहरूलाई दावी हुँदैन सबै अवस्था संग उल्लंघन र अनुपालन बिना सञ्चालन गरेका थिए।
समानान्तर मा, व्यापार परिसमापन प्रक्रिया आवश्यक सम्म मिति जानकारी प्रासंगिक सार्वजनिक Registries मा संस्थापक को एक परिमार्जन र नेता implies जो यसलाई पुन: दर्ता छ।
यो एक न्यूनतम अवधि लिन्छ रूपमा OOO लागू द्वारा परिसमापन, जरुरी मानिन्छ। competently प्रक्रिया गर्न दृष्टिकोण भने, यो दुई हप्ता भन्दा कुनै थप हुनेछ।
1-2 दिन - अध्ययन मालिकको, कागजात खरिद र बिक्री सम्झौताका तयारी र अन्य कागजात लिन्छ।
एक नोटरी द्वारा कागजातहरू को कार्यान्वयन - 1 दिन।
छैन 12 भन्दा कम दिन - कर inspectorate कर्मचारी परिवर्तन को दर्ता।
जबकि पूरा disbandment प्रक्रियाको बारेमा छ महिना लाग्छ बिक्री मार्फत परिसमापन कम्पनी, 2-3 हप्ता लाग्छ।
समावेश notarized लागि सूचीबारे:
बिक्री को सम्झौता।
विवरण मालिकको द्वारा।
को LLC को दर्ता को प्रमाणपत्र।
को संस्थापक कागजातहरू।
संगठन को चार्टर।
NACE कोड संग तथ्याङ्क कार्यालय देखि मद्दत गर्नुहोस्।
लेनदेन सबै सहभागी पासपोर्ट।
बिक्री सीमित दायित्व कम्पनी वा यो अनुच्छेद संग विवाह सम्झौता लागि spouses को सहमति।
ERGYUL देखि निकाल्ने (प्रभावकारी अप3दिन)।
राज्य शुल्क को भुक्तानीको रसिद।
व्यापार परिसमापन बिक्री मार्फत - केही जोखिम सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया। किनकी, संगठन संस्थापक बारेमा मात्र जानकारी र कार्यकारी शरीर को नाम परिवर्तन, वर्तमान भ्याट गर्न खातामा रहन्छ। बिक्री कम्पनी को पूरा भएपछि जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको सारे छ। नाम वा व्यवसाय ठेगाना परिवर्तन गर्न, संगठन कुनै पनि पक्ष परिवर्तन गर्न क्रममा, नयाँ मालिक पैसा र धेरै समय खर्च गर्न आवश्यक हुनेछ।
परिसमापन को एक तरिका रूपमा व्यापार को बिक्री एक सरल र धेरै छिटो प्रक्रिया हो, तर, ठूलो ऋण र आन्तरिक समस्या को उपस्थिति, यस कम्पनीको राम्रो को मालिक स्वैच्छिक दिवालियापन विचार छ। पनि कानुनी निकाय को बिक्री पछि अन्ततः लेनदारों गर्न असुरक्षित दायित्व निस्कनु सक्छ भूल छैन। कम्पनी को बिक्री मा अन्तिम निर्णय गर्नुअघि, फेरि यसरी आफ्नो आवश्यकता, लाग्छ।
OGRN - एक ... जानें INN द्वारा OGRN
उद्यमीहरू कसरी बन्न र आफूलाई लागि काम सुरु गर्न?
रूसी टिभी श्रृंखला "Uninvented जीवन।" सामग्रीहरू: जीवन छ रूपमा
"डाक्टर पर्नासस को इफेक्टिनरीम": लेजर को मृत्यु पछि अभिनेता र फिलिम चालक दल को बरामद बरामद भयो
PowerPoint, ImageReady र Photoshop मा एक एनिमेसन कसरी सिर्जना गर्ने
कविता को विश्लेषण को एक उदाहरण कसरी कविता विश्लेषण गर्न